Tag: kutadza | Martech Zone
Isu tinowanzo taura nezvekutengesa nemari inoburitswa, asi kwete nekurasikirwa kana zvisiri kufamba zvakanaka. Kutengesa mutambo weropa kumakambani mazhinji uye zvinoita sekunge kushivirira kudiki mazuva ano kwevanotengesa kuwedzera, kuvaka hukama, uye kushandura vatengi. Maneja wekutengesa anotova nechinzvimbo chisingafungidzike chekukurudzira uye kutyaira vashandi kuti vasangane uye vapfuure zvinangwa. Tora maneja asiriye mukati uye uzere
Kushambadzira Kundikana: Kana Tech Ichikuvadza Kupfuura Kunaka
Chishanu, Mbudzi 22, 2013 Chishanu, Mbudzi 22, 2013 Douglas Karr
Patinenge tichishanda nevatengi, isu tinowanzovazivisa kuti isu tichiri musango kumadokero kwekushambadzira kwepamhepo… aya achiri mazuva echidiki uye hazvisi zvese zvakaedzwa izvozvi. Asi hazvireve kuti isu hatigone kudzidza kubva mukukanganisa kwevamwe. Iine matekinoroji matsva ari kubuda zuva rega rega, zvinotora ruzivo uye ruzivo rwekushambadzira ruzivo kuti ungashandise sei hunyanzvi hwetekinoroji yekushambadzira uye kuishandura kuita kutengesa
Zvese zvibvumirano zvedu nevatengi vedu zviri kuenderera mberi mwedzi wega wega. Kazhinji kacho isu tinoteedzera yakatarwa chirongwa uye tinenge tisingambo vimbise mutsara wenguva Izvi zvinogona kutaridza kutyisa kune vamwe asi nyaya ndeyekuti chinangwa hachifanirwe kunge chiri zuva rekuburitswa, chinofanirwa kunge chiri mhedzisiro yebhizinesi. Basa redu nderekutengera vatengi vedu mhedzisiro yebhizinesi, kwete kutora mapfupi kuita mazuva ekutanga. Sezvo Healthcare.gov iri kudzidza, ndiyo nzira
Kukundikana: Chakavanzika Chekubudirira
Mugovera, Nyamavhuvhu 28, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Paunowana mukana, tora kopi yeKukundikana: Chakavanzika Chekubudirira nashamwari Robby Slaughter. Robby akaisa pamwechete gwara rakakura rekutadza kubudirira kuti iwe ugone kudzidza uye kukura kubva pakutadza kwako. Ini handikwanise kuita bhuku kururamisira - kune anoshamisa madhisiki kubva kune vamwe vevakuru vatungamiriri muindasitiri. Nekudaro, ini ndoda kugovera zvimwe zvekutadza kwakatorwa kubva mubhuku kuti ndikukurudzire:
Mugovera, June 19, 2010 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Husiku huno hwaive husiku hunoshamisa. Dzimwe shamwari neni takaenda kunoona Eric Davis achiratidzira yake yemurume-mumwe show, Red Bastard, kuIndy Fringe theatre. Iyo showa inoshamisa, inokwezva vateereri uye zvobva zvaparadza zvishoma nezvishoma nhengo yega yega yevateereri imwe panguva. Pane chimwe chikamu chechiratidziro, nhengo dzevateereri dzinobvunzwa kuti zviroto zvavo ndezvipi… zvichiteverwa nemibvunzo nezve izvo zvavanoita. Iye Red Bastard anobva anyengetedza munhu kuti atore